Acoustics waa meel kasta oo ka mid ah nolol maalmeedkeena waana mawduuca dareenka sii kordhaya. Ma rabtaa in aad u ogaato aasaaska hab cusub oo madadaalo leh oo laga yaabo in aad tartan u gasho?
Waxaa sameeyay Jaamacadda Le Mans, iyada oo qayb ka ah Le Mans Acoustique, MOOC "Aasaaska acoustics: codka dhammaan gobolladeeda" waxay ku saleysan tahay barnaamijka baccalaureate sayniska ee rasmiga ah waxaana loo isticmaali karaa taageero ahaan macallimiinta. Fikradaha aasaasiga ah ee barnaamijka waxaa la geyn doonaa in ka badan afar cutub oo ka hadlaya fikradaha hirarka, soo noqnoqda, muunadeynta, iwm.
MOOC kani maaha MOOC codka. Codku waa marmarsiinyo loogu dhowaanayo acoustics.
MOOC-kan, waxa aad wax ku baranaysaa adiga oo daawanaya fiidiyowyada edbinta, xallinta leyliga, samaynta tijaabooyinka iyo sidoo kale daawashada joornaalka MOOC ee toddobaadlaha ah. Si MOOC looga dhigo mid xiiso leh oo soo jiidasho leh, koorsadu waxay ku salaysnaan doontaa dun guud oo ka kooban barashada sida loo beddelo codkaaga jidh ahaan ama dhijitaal ahaan.
Aasaaska acoustics: codka dhammaan noocyada Diisambar 10, 2021Tranquillus
horeMOOC Waxay sameeyaan farshaxan
socdaXakamaynta khataraha shaqada ee kaydinta badarka